Analytics amin'ny calculatera fandoavam-bola | Martech Zone
Asabotsy, Aogositra 12, 2006 Douglas Karr
Mety tsy mieritreritra ianareo rey olona fa mahaliana toa ahy io, fa ity dia pikantsary ahitana ny zavatra hitako Calculator fandoavana. Tena hitako fa mahaliana fa ny hira rehetra dia mandritra ny herinandro ary zara raha misy amin'ny faran'ny herinandro. Heveriko fa manana karazana mpitsidika 2 aho, ireo izay manisa ny ampaham-bola ho an'ny olon-kafa na ireo izay manisa ny fiakaram-bola ho an'ny tenany. Nieritreritra aho fa hanara-maso zavatra toy izao ny vondrona farany amin'ny faran'ny herinandro… saingy tsy izany.
Fantatro fa mila manala ny tranokala ahazoana valiny ao anaty popup aho! Ity taona ity, angamba. 🙂
Sep 23, 2009 ao amin'ny 1: PM PM
Ho an'ireo izay te hahalala… ity no tranonkala No. 1 amin'ny fikajiana ny fiakaranao karama! Tena mamporisika azy aho. Vao tsy ela akory aho no nahazo fampiakarana karama miampy fiakarana fanampiny izay misy ifandraisany amin'ny fisotroan-dronono. Nikajiako ireo isan-jato mitambatra ary nahazo ny fampahalalana marina niseho tamin'ny karamako. Misaotra anao, Dough, nanome anao ity fitaovana sarobidy ity.